IBM waxay ugu deeqday furaha ilaha Lotus Symphony OpenOffice | Laga soo bilaabo Linux
IBM waxay ugu deeqday furaha ilaha Lotus Symphony OpenOffice
Muddo ka hor LibreOffice ayaa u muuqday, fargeeto ah OpenOffice kadib Oracle ayaa iibsaday Sun (horumariye hore iyo milkiile OpenOffice), maahan wax qarsoon taas Oracle dadaal ma gelin oo "guuleystey" in OpenOffice, kaas oo la yimid muuqaalka LibreOffice sidoo kale tiro badan oo barnaamijyada OpenOffice ah oo u goostay LibreOffice.
cunt LibreOffice Waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo faa'iidooyinka taas Tag Xafiiska la yimaado, iyo sidoo kale astaamo kale oo horumariyayaal kale aysan waligood awoodin inay keenaan OpenOffice.
Goor dambe, waxaan ogaanay taas OpenOffice wuxuu badalaa lahaanshaha, markan wuxuu u gudbinayaa Apache, iyo illaa iyo hadda waxaan nahay.
Way dhacdaa inay jiraan wax cusub, isbeddelna maahan wax xun OpenOffice. Xaaladdan oo kale waxaan baraneynaa taas IBM ku deeqo koodhka isha ee Bandhigga Lotus a Apache OpenOffice.org, taasoo u horseedi karta dhowr horumarin tan dambe.
E-mayl ku jira liiska boostada aasaaska Apache, Rob weir (Qeybta Xalinta Wadajirka ee IBM) wuxuu ku dhawaaqayaa waxyaalaha aan soo sheegnay, sidoo kale wuxuu xaqiijinayaa inay caawin doonaan Apache OpenOffice.org si loo hirgaliyo hagaajinta hada la hayo Bandhigga Lotus.
Waxaan ka tagayaa xoogaa soo saar ah si aad xog badan u hesho:
Ugu horreyntii, waxaan ka caawin doonnaa mashruuca OpenOffice.org inuu yeesho horumarka hadda jira Bandhigga Lotus, hoosta Liisanka Apache 2.0, iyo sidoo kale in la sameeyo ahmiyadaha mid ka mid ah horumarintaan sida ugu dhakhsaha badan loo hirgaliyo. Adeegsiga nambarka ka Symphony shaqadaas waa la dardargelin doonaa iyadoo laga dhigayo horumarintaan mid soo socda sii deynta degdegga ah ee soo socota AOOo. Waxaan horeyba ugu beddelnay faylasha caawimaadda Ayuu yidhi, taas oo ka dhigi doonta shaqada mid dhakhso badan, haddii loo socdo jihadaas.
Weir Waxa kale oo uu xusay in GUI (interface garaaf ah) ee Bandhigga Lotus ayaa dhowr faallooyin ka heshay OpenOffice.org, isagoo si maldahan u sheegaya OpenOffice laga yaabee inaad jeclaan lahayd inaad dhex gasho UI.
Isla emailka Weir qira in IBM ma noqon xubin ku dayasho mudan bulshada OpenOffice.org, ayaa sheegay in a IBM waxaad jeclaan lahayd inaad tan saxdo, adigoo ka bilaabaya xoqitaanka Apache.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku jirnaa IBM ma noqonin tusaale xubin ka tirsan bulshada markay OpenOffice.org waxay ku saabsan tahay Haa, waxaan kaqeyb galnay shirar kaladuwan oo bulshada ah, waxaanna qabanqaabinay shirar sidookale waxaan ushaqeynay heerarka. Laakiin markii aan eegnay koodhka sida uu yahay, waanu haynay Symphony asal ahaan sida fargeeto, oo waxaan si dhib leh weligood dib u bixinnaa oo gacan ka geysaneynaa koodhka OpenOffice, waxaan aqoonsan nahay inaysan ahayn tan ugu saxsan.
Hadda wax waliba waxay ku sii jiraan qaybta ApacheHagaag, weli waxba lama go'aansan. Haa Apache tixgelinaysaa in soo jeedinta ee IBM ayaa ka faa'iidi kara OpenOffice, shaki la'aan way aqbali doonaan.
Waxaan u maleynayaa inay xiiso laheyd in lagu sugo isbedelada runta ah, maxaa yeelay riyadu waxba kuma kacayso 😉
Wax kastoo dhaca, anaga ka jaaliyad ahaan marwalba waan ka faa'iidi doonnaa ama si fudud ayaan u sii wadi doonnaa ficilka, maxaa yeelay haddii tan la oggolaado oo OpenOffice waxay la imaaneysaa hawooyin cusub iyo isbedello wanaagsan, ka-faa'iideystayaasha ugu weyni waxay noqon doonaan innaga "bulshada", haddii ay dhacdo in taasna aan la aqbalin oo OpenOffice sii wadaan waxa ay hadda yihiin (qof aan aad loo aqbalin ama caan ah), waa hagaag ... weli waan haysannaa LibreOffice ^ _ ^
Tani waa dhan.
Si kastaba ha noqotee, waxaan su'aasha u daayaa furan ...
Haddii OpenOffice la yimaado GUI cusub oo qabow, ma adeegsan lahayd OpenOffice mise wali waad isticmaali doontaa LibreOffice?
Salaan iyo mahadsanid qof walba oo na aqriyay.
shaqadu si fiican ayey u socon doontaa, horumarka isdhexgalka ayaa la dedejin doonaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » IBM waxay ugu deeqday furaha ilaha Lotus Symphony OpenOffice
Dhowr bilood ka hor waxaan isku dayay Lotus Symphony waxaanan jeclahay muuqaalka garaafka oo aad uga qurux badan Openoffice, waxa layaabka lahaa ayaa ahaa in tifaftiraha isleeggu uusan diyaar ahayn.
Su'aasha ... 🙂 Uma maleynayo labo jeer, waxaan dooran lahaa OpenOffie + Symphony tan iyo jawiga wanaagsan ama GUI wuxuu kordhiyaa wax soo saarka, taas oo aan fursad u helay inaan ku arko softiweerkan IBM oo aan sharad ku galo si wax walba waa hagaagsan tahay, dhammaantoodna, oo leh LibreOffice oo ah tartame, waxaad arki doontaa waxyaabo badan oo cusub oo u dhexeeya qolalkan xafiiska 😉
Halkan su'aashu dhab ahaantii waa:
«Maxay ugu deeqayaan OpenOffice oo aan loogu deeqi LibreOffice?» 0_o
Shaki la'aan isbedelka GUI wax badan buu caawin doonaa, waxaan dareemeynaa "cusub" oo raaxo leh, waxaan u maleynayaa inay wali fursad siinayso OpenOffice + Symphony.
Waad ku mahadsantahay booqashadaada iyo faallooyinkaaga 😉
Waxay ugu deeqeen furitaanka ujeedooyin shatiyeyn. Waa dhaqdhaqaaq furan si loo qaato nooc ruqsad ah - apache- taas oo u oggolaanaysa shaqooyinka soo-saarka ah - horumarinta inaanay ka dhaxlayn rukhsadaha ilaha furan ee xayiraadda, si loo soo saaro alaab ganacsi oo faa'iido leh. in libreoffice, oo leh ruqsad gpl, aysan suurtagal ahayn, maadaama derisyadeeda ay qasab tahay in la jajabiyo.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa wax xiiso leh in tan la sameeyo, maaddaama ay jiraan wax badan oo ku kala firidhsan qolalka kombiyuutarka, sida badan sida Linux Linux, oo iyagu naftooda aan badbaadi karin. dhinaca kale sidoo kale way fiicantahay tan iyo markii ay cadaadis saarayaan libreoffice oo ku qasbaya inay isbedesho, oo aysan u sii ekaanin kali kali ah furitaanka. Aynu rajeyno in horumarka ugu yaraan uu ku yimaado laba siyaabood: hagaajinta UI iyo sameynta koodh fudud
Jawaab Alberto Garea
Gnome3 wuxuu ku darayaa aaladaha laga saari karo ogeysiisyada
LG Cosmos 2 taleefanka QWERTY